I-Scenic Guest Ranch / Queen & Twin Cabin - I-Airbnb
I-Scenic Guest Ranch / Queen & Twin Cabin
Mesa, Arizona, i-United States
Igumbi e-ihhotela ibungazwe ngu-Saguaro Lake
U-Saguaro Lake uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
I-Saguaro Lake Guest Ranch iyindawo engokomlando e-Tonto National Forest. Ipulazi limi ngasemfuleni i-Lower Salt River ngezansi nje kwe-Saguaro Lake, emthunzini we-Goldfield Mountains enhle. E-Saguaro Lake Ranch - ukuphila kulula. Izinsuku ezigcwele ilanga, ezokuvakasha ezijabulisayo, ubusuku obukhanya ngezinkanyezi kanye nenkampani enhle. Izindlu zethu ezakhiwe ngamapulangwe ezingu-20 zasemaphandleni ezinokubukwa okuhlaba umxhwele kwehlane zenza indlu yethu ibe indawo ekahle kakhulu e-Arizona 's Sonoran Desert.
* * * INTELA YOKUHLALA engu 7.27% izokhokhiswa ngokuhlukile lapho ufika.
Indlu eyinhloko yasemapulazini inovulande obanzi obheke utshani onomthunzi onombono ogcwele wamawa e-Bulldog. Ezinsukwini zayo zokuqala, i-lodge yasebenza njengehholo lemfucumfucu, indlu yeqhwa, kanye ne-comissary yezisebenzi zokwakha eziye zahlala endaweni ngenkathi zakha i-Stewart Mountain Dam kusukela ngo-1927 kuya ku-1930.
Isici esiyinhloko segumbi lethu lokudlela siwumqulu omkhulu we-saguaro cactus owawuvame ukuma ezansi kwe-Saguaro Lake. Ukuhlala izinsuku ezingu-60 kuyatholakala ematafuleni amane kuya kweyishumi azungeze i-cactus.
Uma usesha amapulazi ezivakashi e-AZ, uzothola ukuthi ipulazi lethu liyindawo ekahle yokuphumula nokubalekela ukuphila kwedolobha okumatasa. Awekho ama-TV, imisakazo, amawashi, noma amafoni ezindlini zethu ezakhiwe ngamapulangwe zezivakashi ezingu-20 ngenxa yaleso sizathu (nakuba lawo masevisi etholakala endaweni yokuhlala eyinhloko.)
Ngisho noma siyipulazi lasemaphandleni, amakamelo ethu anakekelwa kahle, ajwayelekile, futhi ahlotshiswe ngesitayela sasentshonalanga. Bonke banezindlu zabo zokugezela, futhi ngamunye uyafudumala futhi unesiphephethisi. Ngokuvuselela ukudla okulungiselelwe indlu ngayinye eyakhiwe ngamapulangwe inesiqandisi esincane ne-microwave.
Jabulela isidlo sethu sasekuseni "se-cowboy" esinamaqanda, i-bacon noma isoseji, amazambane, i-yogurt, izithelo ezintsha, ijusi ewolintshi kanye nekhofi/itiye. Siphinde sikhonze okukodwa kokulandelayo ekuseni ngakunye – ama-pancake aluhlaza okwesibhakabhaka, i-toast yesiFulentshi, noma ama-waffles, ngebhotela ne-syrup.
Ibungazwe ngu-Saguaro Lake
Hlola ezinye izinketho ezise- Mesa namaphethelo